သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Net Send In XP
Net Sendဆိုတာ Networkပေါ်တွင်ရှိသော ကွန်ပျူတာများ တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး Messageများ လှမ်းပို့နိုင်သည့် Commandဖြစ်သည်။ Windows XP SP2၌ Net Sendသည် တစ်ကြီမ်တည်းတွင် အလုပ်မလုပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် XP SP2သည် Messanger Serviceကို ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Net Sendအသုံးပြုရန်အတွက် ၄င်း Serviceကို ပြန်ဖွင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၄င်း Serviceကို ဖွင့်ရန်....
(၁) Windows Logo + Rနှိပ်၍ services.mscကို ရိုက်ထည့်ကာ okကို clickလုပ်ပါ။
(၂) Services Windowပေါ်လာပြီး Messanger serviceကိုရှာပါ။ Disableလုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
(၃) Enableလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ထို Messangerပေါ်တွင် R-clickနှိပ်၍ ပေါ်လာသော Menuမှ Propertiesကို ဆက်နှိပ်ပါ။
(၄) ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Enable/Automaticရွေး၍ Okနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Services Local အောက်တွင် Serviceကိုဖွင့်ရန် Startကို နှိပ်ပါ။ Services Windowကို ပိတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဖွင့်ပြီးသွားပါပြီ။
(၁) Windows Logo + Rနှိပ်၍ CMDကို ရိုက်ထည့်ပါ။
(၂) Cmd.exe Windowတက်လာသော အခါ အောက်ပါ Net Send commandကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပုံအတိုင်းကြည့်ပါ။
( net send COM1 Hi! How are you? R U busy?)
- net send သည် net send commandအမည်
- COM1သည် ကွန်ပျူတာအမည်
- Hi How are you? R u busy? သည် မိမိရိုက်လိုသော Messageဖြစ်သည်။
(၃) ရိုက်ထည့်ပြီးက Enterခေါက်လိုက်ပါ။
(၄) မိမိ၏ Messageသည့် အခြားကွန်ပျူတာ၏ screen ပေါ်တွင် Message boxပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်။ net sendလုပ်နိုင်ရန် မိမိနှင့် အခြားကွန်ပျူတာများသည် Administrator rightsရှိရမည်။
Messanger serviceကို ကွန်ပျူတာ အားလုံးဖွင့်ရမည်။
nyanhtetaung on February 15, 2009 at 4:44 PM said...